Weere Factors Iji Nwee a Great Private mejupụtara Author
Ị ga-ịmata "Chicken Ofe maka na Mkpụrụ Obi" usoro bụ n'ezie ịdị? Gbanyeghi enweghị atụ nkwalite na mma mgbasa ozi, ọ bụ onye akwụkwọ onwe ha na ndị ọbịa n'anya ma ọ bụ na ifo. Ha na-na nkenke, onye na ụgbọ okporo ígwè usoro ziri ezi ma ọ bụ a ọzụzụ. Nanị mbio ndị na-esonụ ihe ga na ị chọrọ ga-atụle a ukwuu na-ede akwụkwọ nke nkeonwe mejupụtara:
Ihe-atụle ga-a Great Private mejupụtara Author
Ọtụtụ akwụkwọ na- 500 okwu ma ọ bụ obere. Otú o sina, bụ a sara mbara ụkpụrụ na isiokwu bụ n'etiti abụọ na iri abụọ na ise banyere, abụọ spaced peeji nke. A oké mejupụtara ga-abụ ihe na-agụ ihe ọmụma.
2. Gwa a akụkọ
Onye mejupụtara bụ naanị na ị maara banyere ma ọ bụ a akụkọ na nke ahụ mere n'ihi na ị. Na-ege ntị ga-agụnye ha kpọmkwem na nkọwa anyị ga-amata na-eche na ọ bụ ndị na-abụghị akụkọ ifo. Chepụta gị akụkọ gburugburu atụ, tinye n'ọrụ a pen ka a paintbrush na-akpali foto na agba ihe oyiyi n'ime ụbụrụ na bụ agụ.
3. Mepụta a ogbo
Ị ga-achọ na-agwa, ụgbọ okporo, na dokwuo anya isiokwu ma ọ bụ otu isiokwu na mgbe ụfọdụ ọbụna na enyemaka ma ọ bụ na-akatọ ihe ọ bụla. Ebumnobi ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ unu ga-na-nkwekọrịta ma ọ bụ nchegbu. Adịghị ike ya n'ime ikekwe a Soapbox ma ọ bụ a ozizi site gụnyere "musts 'ma ọ bụ' shoulds 'ezubere iche na-ege ntị na-enye mgbukepụ nke onye aro.
4. Jiri mmetụta gị
Rejuvenate gị mejupụtara na sumptuous akụkụ dị ka o yiri, anya, smelled ma ọ bụ ahụmahụ. Mepụta na-ege ntị na-eche dị ka ha na-enwe na na-elele ya n'oge ahụ unu.
5. Agwa banyere mgbe
Documents na ọtụtụ mgbe ndị kasị mma nke na-ekwu banyere a ngwa ngwa ọ bụ ezie na-ahụkarị Amalite Ijekọ nka. Banyere ịbụ n'ezie a nketa nke abụọ Systems ọ na-adịghị mkpa ka. agwa ka 911 banyere gị nzaghachi. Ma ọ bụ na-ekpughe banyere mmiri nri ma ọ bụ ị na-elele a anyanwụ.
GỤỌ ỌZỌ: Thunder JOB Chọọ Atụmatụ na echiche IHE Ukpep ụmụ akwụkwọ
6. Ekwe ka ọ na a ga-ekere òkè
Ọchịchọ ịmata ga kpalie banyere ndụ. Na ebe nke na-ekwu okwu, ịjụ site n'ịkọwa na kpọmkwem zutere na ẹkenam ị e anyị na-eche banyere gị n'ọnọdụ, kọwaa dị nnọọ mere na ị ịsụgharị gị encounters otú ị na-eme, na ihe mere i mere.
E-i ya. Tụlee gị onwe gị na-achụ ihe na mpaghara nke nkịtị nsogbu ahụmahụ ná ndụ na mgbakwunye na pụrụ iche nghọta, omume, ike, echiche, mbipụta.
Train ndị mmadụ na nke ị na-ama esịn ma ọ bụ enwetara na ị nwetara ọzụzụ. Ọ dị mfe na-irè mgbe ị na-enwe ike na-adọta site kpọmkwem na onye Ama. Mepụta ya. -Ebipụta ya na-amalite na-aghọ a so dee.
ISIOKWU ide Atụmatụ - 6 Iji na-ede A AKWA edemede
Mmụba Nsogbu nke mbanye iji omenala edemede ide Ọrụ
« ISIOKWU Isiokwu maka agụmakwụkwọ ide
Olee otú dee a na-emeri College tinye edemede? »